အဖေဖြစ်သူနဲ့ စိတ်ကြီးတာချင်းတူလို့ အတော်ညှိခဲ့ရပေမယ့် အဖေ့မေတ္တာကြောင့် အားအရမ်းရှိရတယ်ဆိုတဲ့ ဖွေးဖွေး – Suehninsi
နိုင်ငံကျော် မင်းသမီးလေးဖြစ်တဲ့ ဖွေးဖွေးက ဆယ်စုနှစ်တစ်စုကျော်တိုင် အကယ်ဒမီဆုပေါင်းများစွာနဲ့ အနုပညာလောကမှာ ရပ်တည်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖွေးဖွေးက အနုပညာအလုပ်တွေလုပ်ကိုင်နေပြီး အသက်သုံးဆယ်ကျော်သည့်တိုင် အိမ်ထောင်မပြုသေးပဲ မိသားစုတွေနဲ့အတူတူ
နေထိုင်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ အဖေများနေ့မှာတော့ ဖွေးဖွေးက သူမရဲ့ တုနှိုင်းမရတဲ့ ဖေဖေ့ကိုချစ်ကြောင်း အခုလိုပဲ ပြောလာပါတယ်။ “ဘယ်ပုံမှာသားပုံဖြစ်ပြီး ညာပုံသည် ဖခင်ပုံဖြစ်​လေသည် ။😁 အ​ဖေက ရှည်ရှည်​ဝေး​​ဝေး ကဗျာဆန်ဆန်​တွေမကြိုက်လို့ လိုရင်းတိုရှင်းပဲ​ရေးသည်။ဒါ​တောင်ရှည်​နေ​သေးသည်။ ဖခင်များ​နေ့မှမဟုတ်
အမြဲတမ်းနီးပါး အ​ဖေ့ကိုချစ်သည်။ 🤫😋😁🙊စတာ… Always Love You Dad! အ​ဖေ နဲ့ သမီး က စိတ်ကြီးတာခြင်းတူ​တော့ (အ​ဖေက​တော့ပိုကြီးတာ​ပေါ့​လေ ငယ်ငယ်က အ​ဖေက မိုးကုတ်က ဆိုင်ကယ်တဗြင်းဗြင်းနဲ့လမ်းသရဲ တဲ့😛​ဂေါ်…!😎)​တော်​တော်​တော့ညှိယူခဲ့ကြရ​ပေမယ့် အခု အချိန်မှာ​တော့ အ​ဖေ​ပေးတဲ့မေတ္တာ​တွေ နားလည်မှု​တွေ​ကြောင့် သမီး အားအရမ်းပိုရှိရတယ်။ ကျေးဇူးပါ အ​ဖေ…❤💪💪💪​ဖေချစ်များအားလုံး နဲ့
အ​ဖေများအားလုံးလဲ ချစ်ခြင်း​မေတ္တာပို့သပါတယ်ရှင်..” ဆိုပြီး အဖေများနေ့အမှတ်တရလေးကို ပြောထားပါတယ်။ ဖွေးဖွေးကတော့ အနုပညာအလုပ်တွေကို ဒီအချိန်ထိ ကောင်းစွာလုပ်ကိုင်နိုင်တာ သူမရဲ့ နောက်ကွယ်က လိုလေသေးမရှိ ထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ မိဘနှစ်ယောက်ကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း အဖေများနေ့မှာ အဖေ့ရဲ့မေတ္တာတွေကို နားလည်ပြီး ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေနော်။
နိုငျငံကြျော မငျးသမီးလေးဖွဈတဲ့ ဖှေးဖှေးက ဆယျစုနှဈတဈစုကြျောတိုငျ အကယျဒမီဆုပေါငျးမြားစှာနဲ့ အနုပညာလောကမှာ ရပျတညျနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဖှေးဖှေးက အနုပညာအလုပျတှလေုပျကိုငျနပွေီး အသကျသုံးဆယျကြျောသညျ့တိုငျ အိမျထောငျမပွုသေးပဲ မိသားစုတှနေဲ့အတူတူ
နထေိုငျနဆေဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒီကနေ့ အဖမြေားနမှေ့ာတော့ ဖှေးဖှေးက သူမရဲ့ တုနှိုငျးမရတဲ့ ဖဖေကေို့ခဈြကွောငျး အခုလိုပဲ ပွောလာပါတယျ။ “ဘယျပုံမှာသားပုံဖွဈပွီး ညာပုံသညျ ဖခငျပုံဖွဈလသေညျ ။😁 အဖကေ ရှညျရှညျဝေးဝေး ကဗြာဆနျဆနျတှမေကွိုကျလို့ လိုရငျးတိုရှငျးပဲရေးသညျ။ဒါတောငျရှညျနသေေးသညျ။ ဖခငျမြားနမှေ့မဟုတျ
အမွဲတမျးနီးပါး အဖကေို့ခဈြသညျ။ 🤫😋😁🙊စတာ… Always Love You Dad! အဖေ နဲ့ သမီး က စိတျကွီးတာခွငျးတူတော့ (အဖကေတော့ပိုကွီးတာပေါ့လေ ငယျငယျက အဖကေ မိုးကုတျက ဆိုငျကယျတဗွငျးဗွငျးနဲ့လမျးသရဲ တဲ့😛ဂျေါ…!😎)တျောတျောတော့ညှိယူခဲ့ကွရပမေယျ့ အခု အခြိနျမှာတော့ အဖပေေးတဲ့မတ်ေတာတှေ နားလညျမှုတှကွေောငျ့ သမီး အားအရမျးပိုရှိရတယျ။ ကြေးဇူးပါ အဖေ…❤💪💪💪ဖခေဈြမြားအားလုံး နဲ့
အဖမြေားအားလုံးလဲ ခဈြခွငျးမတ်ေတာပို့သပါတယျရှငျ..” ဆိုပွီး အဖမြေားနအေ့မှတျတရလေးကို ပွောထားပါတယျ။ ဖှေးဖှေးကတော့ အနုပညာအလုပျတှကေို ဒီအခြိနျထိ ကောငျးစှာလုပျကိုငျနိုငျတာ သူမရဲ့ နောကျကှယျက လိုလသေေးမရှိ ထောကျပံ့ပေးနတေဲ့ မိဘနှဈယောကျကွောငျ့ပဲ ဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျကွီးလညျး အဖမြေားနမှေ့ာ အဖရေဲ့မတ်ေတာတှကေို နားလညျပွီး ပြျောရှငျနိုငျကွပါစနေျော။